Dr Daraaraa Ximootewos: Lammii Itoophiyaa lammii Ameerikaa ta’anii ji’atti filannoo seenan - Kichuu
[ September 30, 2020 ] How Americans responded to the first presidential debate of 2020	World
HomeAfaan OromooNewsDr Daraaraa Ximootewos: Lammii Itoophiyaa lammii Ameerikaa ta’anii ji’atti filannoo seenan
Dr Daraaraa Ximootewos: Lammii Itoophiyaa lammii Ameerikaa ta’anii ji’atti filannoo seenan
(bbcafaanoromoo)–Daraaraa Ximootewos (PhD) dhaloonni isaanii Kibba Itoophiyaa Godina Booranaa magaalaa Yaa’aballoodha. Amma jireenyi isaanii biyya Ameerikaadha.
Waggoota 13’f Ameerikaa jiraatanis lammummaa Ameerikaa erga argatanii garuu reefu ji’a tokkodha.
Ta’us bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaa bira jirtu, Kilaarkistan keessatti miseensa mana mareef dorgomaa jiru.
Magaalli Kilaarkistan keessa ummanni 13,000 kan jiraatu yoo ta’u biyya Ameerikaa keessatti magaalaa baqattootaan beekamtudha jedhu.
Dhaloonni Gujii, dorgommiin Ameerikaa
”Magaalli kuni baay’ee xinnoodhaa. Xinnoo haa taatu malee namni as keessa jiraatu hanga biyyoota 40 keessaa dhufte.
”Mana kiraa an jiraadhu karaa mirga warra Neppaalii dhufetu jira, karaa bitaatin immoo Barmaati dhufani. Ollaa keenya keessa namoonni Itoophiyaa, Ertiraa dhufani jiru.”
Dorgommiin isaan taasisan miseensa mana maree magaalatti ta’uufi. Filannoo Sadaasa 05 bara 2019 taasifamuf dorgomtoonni 6 teessuma 3’f wal morkatu.
”Lammii Ameerikaa osoo hin ta’in dorgomuu hin dandeessu. Seeratu hin eeyyamu ture,” kan jedhan Dr Daraaraan ji’a tokko keessatti filannoo irratti hirmaachuu isaaniif dimookiraasii Ameerikaa galateeffatu.
”Nam tokko laf dhibii (bakka biraa) dhufe lammii biyya kanaa erga ta’e dudduuba magaala tokko bulchuuf dorgomu jechuun dhugaa dubbachuuf waan guddoo ajaa’ibaadha,” jedhu.
Hirmaannaan isaan biyya ormaatti taasisan lammiilee Itoophiyaafi kanneen siyaasa Itoophiyaa keessa qooda qabanif ergaa dabarsu qaba jedhu.
‘Namni kuni gosi isaa maali, eessaa dhufe osoo hin taane namni kuni yaadni isaa maali maal hojjechuu danda’a kan jedhu ilaalu. Kanaafis, lafti keenya waan guddoo barachuu dandeessi.’
Yoomi jalqabe akka dorgommii kanaaf akka qophaa’an kan gaafanne lammiin Itoophiyaa kuni ”ijoollummaatti jalqabe jechuu nan danda’a,” jedhan.
Wanti dudduubatti nama deebisu sodaadha. Sodaa caccabsaa dura deemaa
Dr Daraaraa Ximootewos, Lammii Itoophiyaa Ameerikaatti dorgomaa jiran
Keessumaa Sirna Gadaa ijoollummaa isaanii kaasanii keessatti dabarsan dorgommii akkanaaf akka isaan qopheesse amanu.
Gama kaaniin, namni waan kaayyoo godhatef akka hojjetu akkasumas yeroo hundaa akka carraaqu qabu gorsu.
”Nuyi lafa namaa jirra. Afaan namaa hin beeknu wanti jedhu waan dhugaati. Haa ta’u malee, eegi yaada qabaattanii waan san godhuf duubatti hin deebi’iinaa.
”Wanti dudduubatti nama deebisu sodaadha. Sodaa caccabsaa dura deemaa,” jechuun namni hundi waan dhalateefi qaba jechuun himu.
Akka isaan jedhanitti magaalaa isaan keessa jiraatanitti namni baay’ee isaan hin beeku. Kanaafuu, duula na filadhaa gaggeessuuf qarshii namootarraa walitti qabaniiru.
Manaa manatti deemaa namoota dubbisaa akka jiranillee himu. ”Waan namni guddoo na hin beeknef jedhe dudduubatti deebi’uuf hin jiru,” jechuun himu.
Maal hojjechuu yaadan?
Pirezidantiin Tiraamp baqattootaaf gaarii natti hin fakkaatani kan jedhan Dr Daraaraan filannoo itti aanu yoo irra-aanaan baqattoota seera Ameerikaa keessa bahaa jirun ‘miidhamaa jiru’ jedhan gargaaruuf yaada qabu.
Akka fakkeenyaatti seerri baqattoota bahe baqattoota gargaarsa nyaataa mootummaa biraa argatan ‘Giriin Kaardii’ akka hin arganne hin dhowwa jedhu.
Kunimmoo baqattoota gara Ameerikaa imalanii achi jiraatan kaardii kana argachuu waan barbaadanif gargaarsa kana dhiisuuf dirqamu jechuun kanaanis namoonni rakkatu jechuun himu.
Imaammata Obbo Tiraampiifi lammiilee Itiyoophiyaa
”Ani yoo aangoo argadhe dhaabbilee bu’aa buufachuuf hin hojjenne (Non – profit organization) waliin ta’un namoonni keenya akka gargaaraman nan hojjedha,” jedhan.
Hojii baqattoota gargaaruu kana osoo dorgommiif hin yaadin durallee akka nama dhuunfaatti hojjetaa akka jiran dubbatu.
Kan biraa immoo namoota bakka hojiitti qarshii gaarii hin arganne gatii madaalawaan manni akka dhihaatuf (affordable housing) akka hojjetan yaadaniiru.
Kunis, yeroo miseensa mana maree ta’aniifi seerri bahu keessa akka seenuuf akka hojjetan dubbatan.
Dabalataanis, lammiilee Itoophiyaa dabalatee kaan Afaan Ingilizii hin dubbannefi tajaajila mootummaa argataa hin jirre yoo isaan achi seenan akka salphatuf yaada qabu.
Isa poolisii fi bulchiinsa magaalaa Kilaarikistan keessa lammiileen Itoophiyaa dhabaman jedhan akka seenan akka hojjetan himu.
Fuuladurattis Mana Maree bulchiinsa Joorjiyaa keessa seenuu akka fedhan himu ga’eessi umrii 39 Booranatti dhalatani Ameerikaatti dorgomaa jiran.
Pirezidantiin duraanii Zimbaabuwee Roobart Mugaabe umrii 95’tti boqotan